Ukuvavanywa kwe-Instagram inkxaso yesikhangeli | Ndisuka mac
Inethiwekhi eyaziwayo yentlalo ye-Instagram inezicelo zendalo zezixhobo eziphathwayo kodwa xa sithetha ngokusetyenziswa kwayo kwisikhangeli inikeza amandla okujonga umxholo kodwa ungawufaki, oku kungatshintsha kungekudala ukuba ukuvuza kuka-Alessandro Paluzzi kuqinisekisiwe.
Kwaye ngulo mvelisi wafumanisa kwikhowudi ye-Instagram ukuba kunokwenzeka Tsala kwaye ulahle imifanekiso kunye neevidiyo ngokwendalo kwikhompyuter yakho usebenzisa isikhangeli Ngaphakathi kwiakhawunti ye-Instagram. Ngokuqinisekileyo oku kuya kuba yinguqu kubasebenzisi bale nethiwekhi yoluntu.
Le yi-tweet epapashwe nguPaluzzi, Kwinethiwekhi yoluntu iTwitter kwaye iya kujikeleza umhlaba ngoku:
#Instagram isebenza kwisakhono sokwenza izithuba kwiwebhusayithi yedesktop 👀 pic.twitter.com/pATuOHiTGE
-Alessandro Paluzzi (@ alex193a) Ngamana 14, 2021
Ayisiyonto enokufika kwangoko, kodwa kubonakala ngathi umsebenzi uyenziwa ukuze uyokugqibela uphunyezwa njengoko iintsuku zihamba. Ukongeza amabali kwisikhangeli kungekudala kunokuba yinto enokwenzeka kwi-Instagram.
Akukho zindaba malunga nesicelo sendalo se-iPad yenethiwekhi yoluntu edumileyo, ke ukuba ezi ndaba ziyinyani, sinokujamelana notshintsho olubalulekileyo kubasebenzisi bethebhulethi yeApple kwaye banokuthi basebenzise i-iPad okanye isikhangeli. ngokwakho ukongeza amabali akho kwi-Instagram. Ngokufanelekileyo, abasebenzisi beMac okanye nayiphi na iPC banokusebenzisa isikhangeli ukufikelela kwiakhawunti yabo. ukuba sisixhobo esinye ukongeza umxholo ... Siza kubona ukuba kwenzeka ntoni ekugqibeleni.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Amahemuhemu » I-Instagram ivavanya inkxaso yesikhangeli
Kufunyenwe ilogo entsha "engenasiphelo" ngaphakathi kuhlobo lwewebhu lweApple Music